Self-kulinywe, Ukuphathwa ukucindezeleka
izindlela eziningi ngempumelelo ukulawula ukucindezeleka kaningi aseluleke ukuba ugxile izinzuzo umbono oqondile ngezinto. Isimo sengqondo esiqondile inenzuzo enkulu umzimba wethu, kodwa futhi qiniseka uqaphele ukuthi sengqondo sokwethaba ekuphileni kungaba "esithathelwanayo". Umnqopho njalo ngezinto ezibuhlungu nezinkinga kungaba akusibekele izikhathi eziningi okujabulisayo okwenzekile ekuphileni kwakho, wena bamane awuboni kubo, futhi ngeke ziqondakala ukubonga abantu.
Izikhalazo ekuphileni - kwabaningi njengoba uhlobo lokuzijabulisa kungabonakala nasemkhakheni ukuziphatha abantu abaningi.
Kukhona ezinye izinzuzo kulesi sibonelo, ngakho ususe ukucindezeleka. Nakuba ngezinye izikhathi nokuveza ukukhungatheka kwabo nokunganeliseki, thina ngempela balahle ukucindezeleka. Nazi ezinye izizathu zokuthi kungani abantu kaningi bathambekele ekukhonondeni.
Ngezinye izikhathi kudingeka 'ngiyobhodla "
Umuntu ongaqhathaniswa ibhodlela lamanzi carbonated, okuyinto njalo ukuyaluza. Siphinde ukuzizwa ngicindezeleka ngezinye izikhathi uzizwa unesifiso sokuba "qhumisa" kusukela izimangalo. Izikhalazo - kungenye yezindlela ukususa ukucindezeleka yangaphakathi, okuyinto thina ngezinye izikhathi uzizwa esimweni esinzima kakhulu kithi. Ngezinye izikhathi, ukhuze, thina nje "ngiyobhodla".
Ngokuvamile lapho siyacasuka noma ngisazizwa ngicasukile ngandlela-thile, ukubonakaliswa iyiphi ukusekelwa okungokomzwelo lomunye umuntu kuyinto namafutha ukuze sizizwe sibaluleke kabi. Uma othile ethi ekuphenduleni ukuthi uyayiqonda imizwa yakho nakho kungaba nzima kuzimo, kulesi simo, uyoqonda la mazwi njengoba ngimbheka mnene kakhulu futhi efudumele. Ngekusitwa nguthishela, umuntu azizwa eqiniseka kakhudlwana, ukulungele ukubhekana nezinkinga futhi ayisekho uzesabe. Kufana izingane ihlongandlebe ngubani nje umama futhi ekugcineni wamanga.
Ukuthola izixazululo kwesokudla
Zama wedwa le nkinga, ngoba iqembu - inhlangano kahle izimfanelo zabantu ezahlukahlukene ngasikhathi sinye. Uma bekhalaza kwabanye ukuthi ukhathazekile, kungase kusize ukuthola izisombululo, okuyinto ungenawo ngisho bona.
Abantu ngokuvamile akhononde, kodwa ngesikhathi esifanayo bakucela nje usizo, nakuba izaziso ezimbalwa futhi uyaqonda.
kudingeka Njalo nombono ohlukile
Lapho senza made kakhulu "varimsya" kunoma isiphi isimo, uhlangabezana into esingaphezu kosuku olulodwa, thina ngokuvamile benza ihaba inkinga yamanje, sibona isivele ehlanekezelwe hhayi ukukhanya lapho ngempela. Iphutha ukuthi sihlala sizama ukuba acabangele kuphela iphuzu lalo umbono.
Ngezinye izikhathi kudingeka sikutshele ngumngane wami oseduze, bafunde kuye, ungaphuthelwa uma wenza okuthile, mhlawumbe kukhona esithile ukuthi ungathathi ku-akhawunti. Kungathatha ukuyibhekisisa inkinga yakho. Uma thina avulekele bezibona omunye umbono, kungaba wusizo ukuthi "hambisa" esikhathini imibono yabo futhi ubone ukuthi abanye abantu bacabanga kanjani ngezinkinga zethu. Ngezinye izikhathi kuyasiza ukuqeda entukuthelo nokukhungatheka, kungavula izixazululo ezintsha kanye namakhono ukuze unqobe ukucindezeleka.
Ungase udinge nesisusa
Ngezinye izikhathi siyazi kudingeke wenze izinguquko ezithile, kodwa nje hhayi uzimisele engozini futhi namanje wenze umzamo owengeziwe kancane. Udinga ugqozi. Kukhanyise nokugxila kwawo yini ebangela nobunzima yakho ukwakhela ngokugqugquzela ukwenza izinguquko ezithile.
Ukukhononda, sifeze umgomo wakho
Lapho isondo is Uyaqina, gcoba it, ukugwema imisindo ezingadingekile. Futhi abantu - akhononde ukuthola okuthile hhayi "wenze ntswininiza." Uma isikhalazo umuntu unekhono ukwenza izinguquko isinqumo isimo, kodwa ngesikhathi esifanayo esebenzisa indlela zokubonisana, izikhalazo zakho zingahle kakhulu eduze kakhudlwana wathola. Ingcono ukuthula. Le ndlela isikhalazo inhlonipho, anganika yi ezithile!
Nokho, isicelo singafakwa nabo bangalimaza sina wena. Lapho amazwi anjengokuthi siguqulelwa umkhuba noma abantu abambalwa njalo baphikelele indlela okhathazeke yabo, ziphenduka zibe iqembu whiners unomphela, futhi iqala ukusihlupha.
Nazi ezinye nemibi izikhalazo:
Ugxila inkinga kunokuba ku izixazululo ezingaba khona. Nakuba isicelo kungaba izindlela ukudala ugqozi, igxile ngempela inkinga kunokuba ku izixazululo ezingaba khona. Uma uchitha isikhathi esiningi kakhulu okhalazayo kwabanye, unomuzwa "ziboshelwe" inkinga, ayeke isixazululo.
Isibikezelo engenathemba. Ucwaningo lubonisa ukuthi kukhona amathuba amaningi isibikezelo babenethemba lokuhle futhi izingibe - kusukela engenathemba. Thina ukujwayela imibono ethile bese uqale ukwamukela ngokuzenzakalela leli themba. Ukuqapha ngaso, ukugxila ezingezinhle ngokuvamile kuholela umbono ongenathemba lokuhle. Imicabango, njengoba sazi, impahla.
intukuthelo eziphikelelayo. Uma ugxila nezinto onesifo akhononde abantu, wena engozini ukuthukuthela. Lokhu intukuthelo kungaba umkhuba, futhi kuvame uthukuthele. Ingase futhi kungaholela ezinkingeni kwezempilo, kanye ngawe akuyona indlela yokuphuma.
iqembu Negative. Izikhalazo - icala "esithathelwanayo." Kwakuyokwenzekani uma iqembu labantu abanikela ukwesekwa nomunye, uqale wafana isixuku? Uma uthola ukuthi wena nabangani bakho ngokuvamile esekhala eyodwa futhi into efanayo, kodwa akusho azizwe engcono, ke sekuyisikhathi ukuthola izihloko ezintsha ukuze sixoxe ngayo.
Ukuguquka izinkinga zabo komunye umuntu. Uma ungenayo i-support group, ukuthi ngandlela-thile kungaba yingozi. Labo ngokuvamile akhononde, abanye ziqondakala njengoba amandla eyayisekhanda lami. Qaphela ukuthi isimangalo sakho akubi esindayo kangaka ukudlanga nasekhulwini Umlaleli, nokumphoqelela ukukusiza.
Izinkinga ukuthi akhononde ngokuvamile kakhulu zidinga izixazululo. Ngokusobala, lapho thina akhononde ngokuthi ngandlela-thile okudambisa ukucindezeleka. Kodwa izikhalazo ngokweqile zezinkinga, enkulu noma akubalulekile kangako, kumane asilona ikhambi ngempumelelo. Ngaphansi akhononde - futhi ngeke ube namathuba angcono kakhulu yokubheka izwe ngombono oqondile nokwazisa.
Kanjani ukuphila ngemva ukukhashelwa kothandekayo?
Kungani kumile ekuzibulaleni kakhulu?
Amir Temur - umkhuzi wempi omkhulu: Biography, amaqiniso athakazelisayo
Tysyatsky - kwehhovisi akhethwe Novgorod. Indlela ukukhetha tysyatskih nokuthi ingxenye imisebenzi yabo
Insipho yokuwasha. isakhiwo